Iyo cast yeiyo Zvino uye Ipapo nhevedzano yeApple TV + inowedzerwa | Ndinobva mac
Zvino uye Ipapo ndiyo yekutanga akateedzera kubva kukambani yekuSpanish yekugadzira izvo zvinotanga kuratidzwa paApple TV +, nhevedzano iyo, sezvatinogona kuverenga muna Deadline, inoramba ichiwedzera vatambi icho chichava chikamu cheiyi nhepfenyuro ichapfurwa muSpanish neChirungu (pamwe ne Echo 3 y Acapulco) Uye iyo inoiswa se chinonakidza chinoitika muMiami.
ari vatsva vatambi vanozove chikamu chevateereri veizvi akateedzana ndiJorge López (Elite), Alicia Jaziz (Vantage Point), Darío Yazbek (Iyo Imba yeMaruva), Alicia Sanz (#RealityHigh), Jack Duarte naMiranda de la Serna (Pamberi pekutanga).
Zvino uye Ipapo iri mitauro miviri yakateerana iyo sIchapfura muchiSpanish neChirungu. Iwo akateedzana akagadzirwa naRamón Campos, Gema R.Neira naTeresa Fernández-Valdés, timu iri kumashure kweanoverengeka eSpanish akateedzana se Velvet, Grand Hotel y Cable vasikana.
Gara muMiami uye neese-yevaSpanish cast, izvozvi uyezve vanoongorora mutsauko uripo pakati pevechidiki zvishuwo uye chokwadi chehukuru, apo hupenyu hweboka reshamwari dzakanakisa kubva kukoreji zvinochinja zvachose mushure mevhiki. Yemhemberero inopera nemumwe wavo. akafa. Zvino, makore makumi maviri gare gare, vashanu vasara vanozezanazve nekubatana pamusoro pekutyisidzira kunoisa nyika dzavo dzinoita sedzakakwana panjodzi.
Pakutanga kwaJune, uyu mumwe wepakati akatizivisa nezvevateereri uye maaimesieti achave ari chikamu chevateveri vakuru veiyi nhepfenyuro: Rosie Perez, Marina de Tavira, Jose María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Vallamil naZeljko Ivanek.
Pari zvino zuva rekutanga rekugadzira harizivikanwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iye zvino uye ipapo akateedzana akateedzera eApple TV + akawedzerwa
Vamwe vashandisi vanogunun'una kuti iyo iMac M1 inomira yakashata